Ụwa nke culinary
Blọọgụ maka ndị chọrọ isi nri nke ọma
Ndị ọzọ bara uru
Esi nri n'èzí
Ogologo oge ole ka ham paụnd 4 ga -ewe iji sie?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji sie ham na-enweghị ọkpụkpụ 4lb? Tinye ham n'ime efere esi mmiri na 1/2 iko mmiri. Na-ekpuchi ihe mkpuchi aluminom. Richaa na 325 ° F maka ihe dịka 20 ruo 30 nkeji kwa paụnd ruo mgbe ọkụ. Na-efe ham ugbu a ma ọ bụ glaze dị ka ndị a: Wepu foil na ham. Kedu ka esi esi nri paụnd 4.4…
Categories Ndị ọzọ bara uru
Kedu otu esi achọpụta na esiri anụ ezi?
Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na esichaghị anụ ezi? Anụ ezi na-esi nri ka ọ dị ngwa ngwa. Ozugbo ọ na-adịghị ahụkebe, ọ dị mma iri nri. Anụ ezi anụ ezi bụ n'onwe ya ihe egwu dị obere, ma ọ bụrụhaala na a gwọọla ya nke ọma. Ọ bụrụgodị na esighị ya, o yighị ka ị ga-emerụ ahụ. Isichalarị anụ ezi si n'ụlọ ahịa? Yabụ…
Ị nwere ike esi nri boerewors si friji?
Kedu ụzọ kacha mma isi esi nri boerewors? Jiri otu ngaji mmanụ oliv na skillet ma kwe ka boerewors gị esi nri na obere okpomọkụ. Obere okpomọkụ ga-ahapụ boerewors esi nri nke ọma ka ọ na-agba aja n'akụkụ nke ọ bụla. Ihe dị ka nkeji iri n'otu akụkụ kwesịrị ezuru mkpokọta nkeji iri abụọ. Kedu ka…
Ajuju gi: Kedu nke ka esi esi nri ma ọ bụ inine raw?
Ọ ka mma iri akwụkwọ nri raw ma ọ bụ sie ya? Iri akwụkwọ nri raw na-enye ahụ gị ezigbo ọkwa nke folate na vitamin soluble mmiri dị ka vitamin C. … Ma nri ndị dị n'ime inine esiri esi na-adị mfe mgbari na ịmịkọrọ ya. Firi dị nro nke akwụkwọ nri esiri esi na-eduga na mwepụta nke vitamin E…
Kedu ka akwụkwọ nri si agbanwe mgbe esichara ya?
Kedu ka akwụkwọ nri si agbanwe ma esi ya? Kedu ka isi nri si agbanwe akwụkwọ nri? Inine isi nri na-akụda mgbidi cell nke osisi, na-ahapụ ọtụtụ nri ndị na-edozi ahụ na mgbidi cell ndị ahụ. Akwụkwọ nri esiri esi na-enye ọtụtụ antioxidants, gụnyere beta-carotene, lutein na lycopene, karịa ka ha na-eme mgbe raw. Akwukwo nri esichara na-ebutekwa mineral ndị ọzọ. Akwụkwọ nri na-atụfu nri ha…
Ị jụrụ: Kedu otu esi esi esi esi nri Swede na ngwa ndakwa nri?
Ogologo oge ole ka swede na-ewe iji esi nri na ngwa ndakwa nri? Tinye onye sweden gị niile na oven microwave. Tọọ ọkpụkpọ ahụ ka ọ dị elu na microwave maka nkeji 20. Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji sie swede diced? Tinye swede na nnukwu efere mkpuchi mkpuchi. Jupụta na mmiri oyi zuru oke ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpuchi mkpọ. …
Ogologo oge ole ka ị ga-esi esi anụ ezi na obere esi nri?
Ị nwere ike iji nwayọọ sie anụ ezi ogologo oge? Ị nwere ike isichaa anụ ezi ahụ? Ọ na-esiri ike ịfụfe ubu mara mma na abụba abụba. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịghọ mushy n'ihi acids dị na ihendori ma ọ bụrụ na nri na-aga n'ihu ogologo oge karịa oge esi nri akwadoro. Gbaa mbọ hụ na ị na-elele anụ ezi…
Ị nwere ike esi nri ham gburugburu na 350?
Ogologo oge ole ka ị na-esi nri spiral ham na 350? Kpoo oven ruo ogo 350 F. N'ime obere ite anụ ọkụ, tinye ham n'akụkụ ala. Na-ekpuchi nke ọma na foil na akpọọ nkụ maka nkeji 45. Ogologo oge ole ka ị na-esi nri ham na 350? Kpoo oven ahụ ruo ogo 350 F. Kpupu ham ma sachaa ya…
Ajụjụ gị: A na-esi nri na esi nri otu?
Kedu ihe ụfọdụ myirịta dị n'etiti isi nri na ime achịcha? Ha abụọ chọrọ nkà na ihe ọmụma. Ha abụọ na-akpọ maka ịcha, ịcha, ịgwakọta, na ịkpali. Ha abụọ nwekwara ike ịmepụta ezigbo ihe ha ga-eri. Mana usoro isi nri na ime achịcha na-adịkarị iche, isi ihe a na-eme ka ọ pụta ìhè ma ọ bụrụ na ị gụọ ha…
Kedu ihe kpatara na ị gaghị eyi ọla mgbe ị na -esi nri?
Ị nwere ike iji ọla sie nri? Dị ka Ngalaba Na-ahụ Maka Ahụ Ike na Ọdịmmadụ nke Idaho si kwuo “ihe ịchọ mma pụrụ izochi ụmụ nje ndị na-akpata ọrịa na-akpata nri ma mee ka o sie ike ịsa aka. … Mgbe a na-akwadebe nri, ndị ọrụ nri ga-ewepụrịrị elekere, mgbanaka, ọla aka, na ọla ndị ọzọ niile dị n'aka ma ọ bụ aka.” Gịnị kpatara na ị gaghị…
Page1 Page2 ... Page888 Osote →
Hey! Abụ m Samantha. Ụwa nke Culinary bụ ụwa dị ịtụnanya, buru ibu na-ejikọta ọnụ. N'ụwa a, anyị na-ewere mma nwere echiche na-egbuke egbuke n'aka anyị iji sie ndị anyị hụrụ n'anya. Na ísì ụtọ nke efere ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike iburu anyị mgbe ụfọdụ n'oge kacha nwee obi ụtọ ná ndụ anyị. Ndị niile hụrụ n'anya ma chọọ isi nri, Nnọọ!
© 2022 Ụwa nke nri nri